Ukuhlukanisa ngezigaba, ukuhlunga, ukumaka, ukuqoqa, ukubuza, ukufaka izinkomba, ukuhlela, ukufometha, ukugqamisa, ukuxhumana ngenethiwekhi, ukulandela ukuhlanganisa, ukuthanda, ukuthumela i-tweeting, ukusesha, ukwabelana, ukubekisa, ukumba, ukukhubeka, ukuhlunga, ukuhlanganisa, ukulandela umkhondo, ukubalula… kubuhlungu impela.
Ngabikezela ukuthi u-2010 uzoba unyaka ka ukuhlunga, ukwenza ngezifiso, nokwenza kahle. Namuhla, anginasiqiniseko sokuthi sisondelene namanje - kungenzeka ukuthi siseneminyaka siphumile. Okusemqoka wukuthi siyayidinga manje, noma kunjalo. Umsindo usuvele uvala izindlebe.
Ukukhangisa kohlelo, ubuhlakani bokufakelwa, kanye nokufundwa kwemishini konke kufakwa efwini ukuzama ukuthuthukisa ukubaluleka nokuqondiswa kwezokuxhumana. Okusemqoka ukuthi bonke lobu ubuchwepheshe obusetshenziswe izinkampani ukulawula ukuxhumana kumsebenzisi wokugcina. Lokhu kubuyela emuva ngokuphelele… sidinga amasistimu lapho umsebenzisi angalawula kalula imininingwane abondliwe ngayo nokuthi bayondliwa kanjani.
Izinkampani ezinjengeFirefox, iGoogle neApple zingasiza. Ngu ukwenza iphutha Ukulandela umkhangiso kukhutshaziwe lapho ifakwa, ibeka umthwalo ezandleni zomsebenzisi. Njengomthengisi, kungazwakala njengamantongomane kimi ukufuna abathengi namabhizinisi bayeke ukungilalela. Kepha uma ngingenandaba futhi ngicasula, yilokho impela okufanele bakwenze. Abakhangisi basalokhu behluleka njalo ukuthumela umlayezo kuwo wonke umuntu bese behlukanisa futhi belungisa umyalezo.
I-GDPR nayo ingasiza. Angazi ukuthi umthelela waba yini i-GDPR yokuqala imiyalezo yokungena ezinkampanini, kodwa nginomuzwa wokuthi ibibuhlungu kakhulu. Ngenkathi ngikholelwa ukuthi yayinzima kakhulu, izokwenza abathengisi abangcono kakhulu kithi. Uma ngabe besikhathazeke ngokweqiniso ngayo yonke imilayezo ebesiyithumela, lapho siyithumela, nenani eliyilethile kulokho okulindelekile noma kumakhasimende - ngiyaqiniseka ukuthi sizothumela ingxenyana yawo. Futhi uma abathengi bengaqhunywanga ngamabhomu, kungenzeka bangaphoqeleli umthetho osindayo onjengalona.